Filaharana teo amin’ny Tsena mora: raikitra ny totohondry, lehilahy iray naratra voatsatoka antsy | NewsMada
Par Taratra sur 09/03/2021
Tovolahy roa no nifandramatra nandritra ny filaharana teo amin’ny Tsena mora, tao biraom-pokontany Ambohinjafy, parisela 14/32, Toamasina, ny asabotsy teo. Naratra mafy, voatsatoka antsy tamin’izany ny iray, ary mbola ahiana ny ainy, hatramin’ny omaly.
Raikitra ny fifanjevoana teo amin’ireo mpividy entana ao amin’ny Tsena mora tao amin’ny fokontany Ambohijafy Toamasina Parisela 14/32, ny asabotsy maraina tokony ho tamin’ny 9 ora. Nifampihantsy ady ireto tovolahy roa samy nilahatra ho ao amin’ny Tsena mora noho ny olana teo amin’ny fandaharana ny harona manoloana ny fokontany. Raikitra teo ny fifamaliana, izay niafara tamin’ny totohondry. Tsy nisy nanasaraka rahateo ny olona fa nijery fotsiny ny adin’izy roa lahy. Tsy nisy polisy nandamina koa teny an-toerana ka vao mainka nampiakatra ny hafanam-po teo amin’ireto roa lahy nifamaly izany. Tsy vitan’ny totohondry ny fifandonana fa namoaka antsy avy hatrany ny iray ka notsatohany antsy teo amin’ny hatony ilay nifamaly taminy. Vokany, nijininika ny ra ka nitambotsotra ilay niharam-boina. Lasa nandositra kosa ilay nahavanon-doza rehefa nahita ilay nifamaly taminy fa naratra mafy. Nentin’ireo olona haingana tany amin’ny hopitaly kosa ilay niharam-boina naratra. Atahorana ny ain’ity tovolahy niharam-boina ity noho ny ratra mafy nahazo azy. Mbola arahi-maso akaiky ao amin’ny hopitaly kosa izy hatramin’ny fotoana farany nanoratanay.
Tsy ampy ny fandaminana ataon’ireo tompon’andraikitra…
Ifanotofana hatrany ny filaharana eny amin’ny Tsena mora rehefa asabotsy isaky ny fokontany na eto an-drenivohitra izany na any amin’ny faritra. Ilaharana ny vary sy menaka sakafo. Misy ireo olona sasany, menaka sakafo ihany no tiany jifaina fa tsy hividy vary. Misy ireo fokontany sasany manaiky izany raha tsy manaiky izany kosa ny fokontany sasany fa tsy maintsy mividy vary vao mahazo menaka. Amin’ny 4 ora maraina, efa mitandahatra ny harona eny amin’ny biraom-pokontany, ao indray ireo mifanaraka amin’ny mpiambina dia mahazo laharana aloha. Ny hafa kosa mametraka vola amin’ny mpivarotra ao amin’ny Tsena mora dia tsy milahatra. Midika izany fa tsy ny fisian’ny Tsena mora no olana fa ampy soa aman-tsara ny entana, ny fandaminana ataon’ireo tompon’andraikitra no miteraka olana ka mahatonga ny fifanjevoana eo amin’ireo mpiantsena.